Imali yokutshintsha Rand (ZAR) Ukuze Euro (EUR) bahlala zonaniso Forex
Amazinga Forex exchange oluhlaziyiweyo: 16/04/2021 15:54
Rand ukuya Euro ixabiso ngoku kwi zonaniso Forex ngelo 16 UTshazimpuzi 2021
15:54:31 (Umyinge Forex uhlaziyo in seconds 59)
1 EUR = 17.14 ZAR
Umthombo wamanani otshintshiselwano yi-Forex exchange. Kwi-Forex, i-1 Rand iindleko 0.06 EUR. Bona Rand ukuya Euro umyinge qho ngemizuzwana engama-30. Uhlaziyo olukhawulezileyo lwe Rand.
Itshathi Forex yorhwebo Euro - Rand ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Itshathi Forex yorhwebo Rand Ukuze Euro ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Sebenzisa itshati yokutshintsha kwemali ye Rand ukuya Euro 16 UTshazimpuzi 2021. Rand ukuya Euro ilungele ukubukelwa kwitshathi. Kwitshathi, ubona ngokukhawuleza ukunyuka okanye ukuwa kwemali. Igrafu ye Rand ukuya kwi Euro ivele ngokuzenzekelayo kwimizuzwana engama-30.
Tshintshela Rand Ukuze Euro Rand Ukuze Euro Imali yokutshintsha Rand Ukuze Euro imbali izinga lotshintshiselwano
Lokurhweba ngekhompyutha Rand (ZAR) ukuba Euro ngelo xesha
Utshintsho lwexabiso lokutshintshwa linokujongwa umzuzu ngamnye. Izinto eziguquliweyo ze Rand ( ZAR) ukuya ku Euro ngalo mzuzu ngu- -0.0000 EUR. Amanqanaba Rand ukuya kwi Euro yonke imzuzu ibonisiwe kwitafile kweli phepha. Ukuthumela ngokulula ulwazi kwinqanaba lomzuzu kwisiza.
Lokurhweba ngekhompyutha Rand (ZAR) ukuba Euro urhwebo lilixa lokugqibela
Utshintsho lweqondo lokutshintshwa kunokujongwa iiyure zonke. I Rand yawa -0.0001 EUR kwiyure yokugqibela. Indawo ibonisa itafile yokuthumela iiyure ezili-10 Rand ukuya kwi Euro ngeyure nganye. Amaxabiso a Rand ngeyure nganye zibekwe etafileni ukuze kube lula ukubona umahluko.
Lokurhweba ngekhompyutha Rand (ZAR) ukuba Euro Intsingiselo yanamhlanje 16 UTshazimpuzi 2021
15:54 14:54 13:54 12:54 11:53 10:53 09:53 08:36 07:23 06:23